Kusakhalwa ngesomiso kwabesifazane abasezikhundleni eziphezulu | IOL Isolezwe
Kusakhalwa ngesomiso kwabesifazane abasezikhundleni eziphezulu
Isolezwe / 14 June 2012, 11:24am /
BASEYIDLANZANA abesifazane abasezikhundleni eziphezulu ezinkampanini zakuleli.
Yize abantu besifazane bebaningi kakhulu eNingizimu Afrika bancane ngokuxakile ezikhundleni zokuphatha ezinkampanini.
Lokhu kuvezwe wucwaningo lwenhlangano ebhekele ukusimama kwabesifazane kwezamabhizinisi iBusiness Women’s Association of South Africa (BWA).
Ngokwalolu cwaningo bangamaphesenti angaphansi kwamane abesifazane abasezikhundleni eziphezulu. Lolu cwaningo luveza ukuthi bangamaphesenti angu-3.6 abesifazane abahola izinkampani, bangamaphesenti angu-5.5 abangosihlalo kanti bangu-17% abangabaqondisi ezinkampanini abasebenza kuzona.
Nakuba kubonakala sengathi ayanyuka amazinga abesimame abaphethe izikhundla eziphezulu ezinkampanini, basebancane kakhulu omama abangabaqondisi.
Inani labangabaqondisi linyuke kancane kulo nyaka njengoba abantu besimame bebengamaphesenti angu-15.8 kodlule.
UNkk Kunyalala Maphisa we-BWA uthe lolu cwaningo lukhombisa ukuthi kusekuningi okudingeka kwenziwe ekuthuthukiseni abesimame.
“Lukhombisa ukuthi kufanele kwenziwe okukhulu ukulinganisa amazinga phakathi kwabesimame nabesilisa ezinkampanini. Ukuphakanyiswa kwabesifazane akuseyona into ekhuthazwayo kuphela kepha sekuyisidingo esinqala,” kusho uNkk Maphisa.
Eminye imiphumela iveze ukuthi kudingeka ukuthi abesifazane banikwe amathuba afana nawanikwa abesilisa ngokuthi bafunde baze bafinyelele ekutholeni imisebenzi efana neyabesilisa. Ucwaningo luthe lokhu kudingeka ukuthi kwenzeke nasemiphakathini kungagcini emahhovisi kuphela.
Kubhekwe izinkampani ezingu-329 ezibalwa kwi-JSE, ezingu-57 eziku-Alt-X nezingu-20 eziphethwe nguhulumeni.
Ezinkampanini ezingu-38 bekunamaphesenti angaphezu kuka-25 abesifazane abasema-bhodini athatha izinqumo ezinqala kulezo zinkampani. Kodwa ngo-2008 zazingaphezu kuka-58.
Khona manjalo izinkampani ezingu-35 ziveze ukuthi azinabo kwakona abaholi besimame. Lesi sibalo singaphezu kwesangonyaka odlule.
Ucwaningo luveze ukuthi abesimame benza kangcono ezinkampanini zika-hulumeni njengoba amaphesenti angu-40 abasebenzi abasezi-khundleni eziphakeme kungabesimame. Abacwaningi bathe lokhu kungenziwa ukunyuka kwenani labesifazane abasebenza kuhulumeni.
Yize kungathokozisi ngokuphelele kepha inani labesifazane abanga-baqondisi ezinkampanini linyukile uma kuqha-thaniswa nelangonyaka odlule.
Kulo nyaka kunabaqondisi besifazane abangu-669 uma kuqhathaniswa nabangu-646 bangonyaka odlule.
Ucwaningo luveze ukuthi baningi kakhulu abesifazane abangabaholi bezinkampani uma kuqhathaniswa nabamnyama kanti baningi abamnyama abangaba-qondisi kunabamhlophe.
“Izinqumo eziningi ezinqala zithathwa ebuholini obuphezulu, ngakho umbuzo omkhulu kuba wukuthi ngabe laba besifazane abangabaqondisi babekelwe ukubukisa nje kuphela,” kusho uNkk Maphisa.
Uthe iNingizimu Afrika ayenzi kabi kakhulu uma ibekwa namanye amazwe.
Abesimame abahola izinkampani bangaphansi kwesishiyagalolunye e-Australia. E-Canada bangamaphesenti angu-17 kanti e-United States bangamaphesenti angu-14 nje kuphela.
Okunye okubalulwe yilolu cwaningo wukuthi ziyisishiyagalombili kuphela izinkampani zakuleli ezinabesifazane ezikhundleni eziphezulu. Kulezi zinkampani kubalwa uStandard Bank, ABSA, Old Mutual, Tiger Brands, Aspen Pharmaceuticals, African Rainbow Minerals, Anglo Ashanti neRMB Holdings. – Intatheli yeSolezwe